पुष्पा थपलिया सोमबार, माघ १२, २०७७, १२:३०
काठमाडौं- ६ जना पात्रहरु पालैपालो मञ्चमा आउँछन्। सबैका आँखामा प्रश्नै प्रश्न र आक्रोश प्रतिबिम्बित हुन्छ। उनीहरू सेतो रंगको गोलो ‘प्रप्स’मा आफूलाई उभ्याउँछन् र आँखामा पोखिन खोजेका प्रश्न दर्शकतिर फर्केर सोध्न थाल्छन्।
हरेकका प्रश्नले दर्शकको मथिंगल हल्लाउँछ। शरीरको रौं ठाडो पार्छ। र, एकछिन सोच्न बाध्य बनाउँछ।
कलाकार पवित्रा खड्कासँग गरिबीको प्रश्न छ।
कलाकार संगिता उराँवसँग आफू कालो हुँदा समाजले गरेको रंगभेदका प्रश्न छन्।
अझै दर्दनाक प्रश्न तेर्स्याउँदै मञ्चमा आउँछिन् कलाकार सुमित्रा लामिछाने। उनका आँखामा नाबालिकामा समेत कामुकता देख्ने नजरप्रति प्रश्न मात्र छैन उत्तिकै आक्रोश पनि उम्लिएको छ।
कलाकार नम्रता अर्यालले लिंगका आधारमा गरिने भेदभावबारे प्रश्न उठाउँदा कलाकार सुहाना आचार्यले ‘बडी सेमिङ’ माथि प्रश्न तेर्स्याउँछिन्।
कलाकार साहिना भट्टराईको आँखामा भने अहिलेको समयमा समेत प्रेम गर्न जात हेर्नुपर्ने किन भन्ने प्रश्नका ज्वारभाटाहरु देखिन्छन्।
काठमाडौंकोे बत्तिसपुतलीस्थित गोठाले नाटकघरले समेत परिचित शिल्पी थिएटरमा मञ्चित नाटक ६ पात्रको एकालापमा उठाइएका प्रश्न हुन् यी।
घिमिरे युवराजको लेखन तथा निर्देशनमा बनेको यो नाटक कोभिड–१९ को महामारीले नाटकघर बन्द भएको लामो समयपछिको पहिलो नाटक हो। नाटक शनिबारसम्म मञ्चन गरिएको थियो।
लेखक तथा निर्देशक घिमिरले सम्पूर्ण नेपालीका प्रश्नका रुपमा पात्रमार्फत् माथिका ६ प्रश्न उठाएका छन्।
विशेषतः महिलावादी नजरबाट यसलाई मञ्चन गरिए पनि गरिबी, रंगभेद, जातीयता, ‘बडी सेमिङ’का विषयमा पुरुष पनि उत्तिकै पीडित छन्। गरिबी, ‘बडी सेमिङ’, रंंगभेद र शारीरिक, मानसिक शोषण मनोरञ्जन क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी छ।
कलाकारले नाटकमार्फत् आम दर्शकसँग उठाइरहेका यी प्रश्न कलाकारिता क्षेत्रमाथि नै उठाउँदा कसो होला ?
नेपाली कलाकारितामा सुन्दरताको मानक गोरो छाला मान्ने चलन अहिले पनि छ। कालो अनुहार भन्नेबित्तिकै फिल्ममा देखाइने पात्रहरु कागज टिप्ने, पानीपुरी बेच्नेका रुपमा देखाइन्छ। गोरो छाला नभएका महिला पात्रलाई घरको नोकर्नी, गरिबी र दुःखमा बाँचेको, सधैं लोग्नेले जाँड पिएर कुट्ने भूमिका दिइएको हुन्छ।
नेपाली कलाकारिता क्षेत्रका अगुवाहरुको रंगभेदी सोच कति छ भन्ने जान्न यिनै दृश्य पर्याप्त छन्।
यसै विषयलाई लिएर केही समयअघि अमेरिकामा ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर’ अभियान चल्यो। ‘फेयर एण्ड लभ्ली’को विज्ञापन खेल्ने केही नेपाली अभिनेत्रीले पनि यो विषयमा आफ्ना बिचार राखे।
नेपालमा हुने विभिन्न सुन्दरी प्रतियोगितामा पनि गोरो छाला भएका नै सुन्दरीको ‘क्याटेगोरी’मा पर्ने गर्छन्। निकिता चाण्डक मिस नेपाल हुँदा स्वीकार्न धेरै कलाकारलाई मुस्किल परेको थियो।
नेपाली चलचित्रमा नाजिर हुसेन मात्र यस्तो अपवादका पात्र हुन्, जसलाई सबैले नायकको रुपमा स्वीकारेका छन्। शिवशंकर रिजाल (जो, जोगिन्दरको नामले परिचित छन्) पान पसलेबाट कहिल्यै अर्को चरित्रमा पुग्न सकेनन्।
आलोचनामा फसिरहने अर्को चरित्र छ, मिठाइलाल ज्यादव। कलाकार सन्दीप क्षेत्रीले मिठाइलाल जादवका रुपमा मधेशी पात्र रोजेका छन्, जहाँ उनी गहुँगोरो छालामा कालो दलेर प्रस्तुत हुन्छन्।
नेपाली मनोरञ्जनका क्षेत्रमा यस्ता कयौं पात्र छन्, जसले रंगभेदी भावना बोकेका छन्। र, गोरो छाला नहुनेहरुलाई निरन्तर अपमान गरिरहेका छन्।
‘बडी सेमिङ’को प्रश्न
करिष्मा मानन्धरकी छोरी कविताले एउटा यस्तो प्रेम कहानी चलचित्रमार्फत् नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यू गरिन्। उनको काम हेरेर धेरै कलाकारले एकै प्रकारका प्रतिक्रिया दिए। कविताले शरीरको बोसो घटाएर फिल्म क्षेत्रमा आउनुपर्छ। उनको अभिनय जस्तोसुकै होस्, यहाँ नजर पर्‍यो उनको मोटो शरीरमा।
यस्तै प्रतिक्रियाको सामना गरिरहनुपर्छ नायिका वर्षा रावतले पनि। जतिनै शरीर फिट राख्ने कोशिस गरे पनि उनी ह्वात्तै मोटाइहाल्छिन्। फिल्म क्षेत्रकै मान्छेले जिब्रो टोक्दै भन्छन्–‘कत्ति साह्रो मोटाएको, हिरोइनजस्तो देखिएन।’
नायिका तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलाले आफ्नो शरीरलाई लिएर निकै गाली खेप्नुपर्‍यो। उनलाई राजेश हमालसँग जोडिएको ‘महानायक प्रकरण’ले निकै गाली खुवायो। जसमा अधिकांशले उनको मोटो शरीरमाथि भद्धा मजाक गरेका थिए।
केही दिनअघि कलाकार सुस्मा कार्कीको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा भाइरल भयो। उनले उक्त भिडियोमा भनेकी छन्, ‘त्यस्तोलाई भन्छ कलाकार, के कुरा गरेको तपाईले? लाओस् न १०–१५ लाखको लुगा, मर्सिडिज कारमा आओस्, सबैले देख्न तम्सियोस्, त्यस्तोलाई भन्छ सेलिब्रेटी।’
यो सोच नायिका कार्कीको मात्रै हैन, मनोरञ्जन क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक सोच हो। केही समयअघि यस्तै लफडामा परेकी थिइन्, नायिका पारमिता आरएल राणा पनि। ‘म गुचीको कपडा लगाउँछु, औकात छ भने तिमी पनि लगाएर देखाऊ’ भन्ने आशयको प्रतिक्रियाले उनका ‘फ्यान’हरु निकै रिसाएका थिए।
हुन त तामझाम र तडकभडकमा पनि कलाकार नै अगाडि छन्। नेपाल जस्तो सानो फिल्म बजार भएको देशमा उनीहरु बिहेमा करोडौं खर्चिन्छन्। केही समयअघि सुनैसुनले ढकमक्क भएर हेलिकप्टर चढेर बिहेको रिसेप्सन पार्टी दिएकी आँचल शर्मा मात्रै होइन पाँच तारे होटलमा भव्य पार्टी दिएकी प्रियंका कार्की, ऋचा शर्मा, स्वेता खड्का नै किन नहोउन् धनसम्पत्तिको दम्भ उनीहरुमा देखिन्छ।
जसले कलाकार समाजका ऐना हुन् भन्ने मान्यतालाई गिज्याइरहन्छ।
म भाइरल हुन आएको गायक हैन: बसन्त अर्याल